Torban kana Itoophiyaan maal keessa turte? – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooTorban kana Itoophiyaan maal keessa turte?
Torban kana Itoophiyaan maal keessa turte?
Keelloo: Hagayya 15,2021
Itoophiyaa biyya lolli keessoo jabaan keessatti adeemaa jiru ta’uu addunyaa quba qaba. Waraanni sun tarii goolaba argachuu mala, tarii ammoo hammaachuus mala yaadni jedhu nama hedduu keessa buleera.
Torban dabarsaa jirru kana keessa waan Impaayera Itoophiyaa daran rifaasisu, kan rakkoo ulfaataa itti ta’u guddaan dalagameera. Kun waraanaan haleelamuu loltoota mootummaa dabalata.
Riphe loltoonni biyyattii keessaa hedduun TPLF waliin hariiroo waraanaa uummachuun, waraanni mootummaa Itoophiyaa walii isaa walitti deebi’ee wal haleeluu torban dabarsine haalaan balballoomaa ture.
Addatti humni riphe lolaa Waraana Bilisummaa Oromoo dabalatee hedduun isaanii hariiroo waraanaa TPLF waliin torban uummatan ture. Torban darbe kana haala isaa wayiita ilaallu kasaaraa guddaan mootummaa irra gahera.
Humnoonni mootummaa dura dhaabbatan walii galtee irra gahuun isaanii daranuu sirnicha butuchuu danda’uu isaanii raagessee jira. Mootummaan Itoophiyaas dhimmicha qeeqaa tureera. Akkasuma waan ta’e kana miidiyaaleen addunyaa wal harkaa fuudhuun gabaasaa turaniiru.
WBO’n qaamota waggaa dheeraaf wal lole waliin wal ta’uu ilaalchisees ibsa baasee jira. Ibsi isaa kunis TPLF waliin wal ta’uuf haalli ammaa akka isa dirqamsiisu kan hubachiisu, ammatti diina tokko waliin qabaachuu ibsaa tureera. Akkasuma TPLF illee gama isaan WBO faana hariiroo waraanaa tolfachuu irratti yaada kennee jira.
Mootummaan gama isaan dhimmicha salphisee ilaaluun ibsa baaseen, WBO’n akka mana warra gumaa seenetti hubachiisa laataa jira. Uummati hedduun ammoo humna waraana mootummaa kan paartii badhaadhinaa hundeen dhabamsiisuuf hariiroo WBO’n uummate gammachuun simataniiru.
Kanaan alattis waraanni Bilisummaa Oromoo onaalee Oromiyaa keessaa hedduu lolaan injifachuu isaa labsaa jira. Waraana mootummaa hedduus tohachuu isaa beeksiseera. Akka odeessa torban kanaatti WBO’n Kibba Oromiyaa godiina Gujii Lixaa fi Lixa Oromiyaa Wallagga godinaalee arfan keessaa onootaaf magaalota hedduu tohachuu ibsaa jira. Daandiiwwan gurguddaa gofiinaaleef naannolee ollaan wal quunnamsiisan Lixa Oromiyaa bakka hedduutii kutee jiraachuus WBO’n beeksisee jira.
Mootummaan dhimma WBO’n lola gaggeessaa jiru ilaalchisuun yaada kenne hin qabu. Dhimma daandileen WBO’n citanii jiraachuu ilaalchisuun garuu; mootummaa irraa akka miidiyaa BBC tti himanitti ammoo humnooti hidhatan furtuu konkolaataa waan uummata irraa guuraniif geejibni dhaabbate jechuun ibsa laatan.
WBO'n Oromiyaa kutaalee hedduu torban kana dhuunfachuun beeksise
Keelloo Media: Hagayya 11,2021 Waraanni Bilisummaa Oromoo WBO'n lola qaamolee waraanaa mootummaa waliin Oromiyaa keessatti…
SQ Dhimma awwaalli jaal Nadhii Gammadaa argamuufi lafee qotamee ba'e ilaalchisee keessa beektonni maal jedhu?
Akkamitti dhidhima kana keessa Deebinee Seenne? Damee Boruu tin, Bitootessa 24, 2019 Xiyaara Itoophiyaa dhiyyenya…
Oduu Hagayya 15, 2021, Injifannoo WBO